မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): အပျိုလေးရဲ့ သွေးကိုမှ ငမ်းငမ်းတက်သောက်မြိူချင်တဲ့ အောက်လမ်းဆရာ´´ ဖြစ်ရပ်မှန်
အပျိုလေးရဲ့ သွေးကိုမှ ငမ်းငမ်းတက်သောက်မြိူချင်တဲ့ အောက်လမ်းဆရာ´´ ဖြစ်ရပ်မှန်
အခုဇာတ်လမ်းလေးဟာ 18+ ပါပါတယ်။ ကြိူတင်ပြီး မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ သို့သော်ငြား တကယ်ဖြစ်လို့ တကယ်ကုခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို စာမူရှင် ဆရာက ဝန်ခံထားပါတယ်။
`` ဆရာမောင်မောင်ရှိပါသလားခင်ဗျား ´´
`` ရှိပါတယ် ဘယ်သူပါလိမ့် ´´
`` ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကျွန်တော် မြင့်သိန်းပါ
မှတ်မိရဲ့လားဆရာ ´´ `` နေကောင်းတယ်မလား ကိုမြင့်သိန်းကို မမှတ်မိပဲ ရှိပါ့မလားဗျာ အစွဲကောင်းကောင်း ကုပေးခဲ့ရတာကို ၊ ဆိုပါဦးလာရင်းကိစ္စလေး လာ ရေနွေးသောက်ဗျာ ´´
``ကျေးဇူးပါဆရာ အကူညီလိုလာလို့ဆရာရေ ကျွန်တော့်ရပ်ကွက်ထဲက ဦးခင်အောင်ကို သိလားဆရာ ´´ `` အင်း သိတော့ မသိပါဘူး ဆိုပါဦး ´´ `` သူ့အလုပ်က အပြိုင်အဆိုင်များတယ်ဗျ အခုတလော သူ့အလုပ်တွေ ရှုံးနေတာ များတယ်တဲ့ လူလည်း ကျန်းမာရေး ချူချာလာတယ် ဆေးခန်းပြတော့လည်း အကောင်းကြီးတဲ့ အဲတာ ကျွန်တော်နဲ့ တွေ့တော့ ဆရာရှိကြောင်း ပြောပြရာမှာ သူက ရှိရင် ကုချင်ပါတယ်တဲ့ ခြေတစ်ဖက်ကလည်း လေဖြတ်သလို စဖြစ်နေတယ်တဲ့ဗျာ ´´
``သူက ဆန္ဒရှိရင်တော့ တောင်းဆိုလာရင်တော့ ကုရတာပ ဗျာ´´ `` ဆရာအခုအားသလားခင်ဗျ ´´ `` ကျွန်တော်အခု အိမ်မှာ နေ့လည်စာ စားဦးမယ်လေ စားပြီးသွားတာပေါ့ ကိုမြင့်သိန်းပါတပါတည်းစားလိုက် ´´ `` ဟာ ဆရာရယ် သူတို့အိမ်မှာ အဆင်သင့် ရှိပါတယ်။ သူတို့က ထမင်းဆိုင်လည်းဖွင့်ထားတယ် အခြားအလုပ်တွေလည်းလုပ်တယ် သူ့အိမ်ရောက်မှ စားကြပါစို့လားခင်ဗျ ´´ `` ကောင်းသလိုသာ လုပ်ဗျာ ကျွန်တော် ဆေးအိတ်ယူလိုက်ဦးမယ် လိုရမယ်ရပါ ´´
သို့နှင့် ဆရာမောင်မောင်နှင့် ကိုမြင့်သိန်းတို့သည် ဦးခင်အောင်ဆီသို့ ရောက်ခဲ့ကြလေသည်။
``မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော် ခင်အောင်ပါ ´´
`` မင်္ဂလာပါဦးခင်အောင် မောင်မောင်ပါခင်ဗျာ ´´
ကုလားထိုင်ပေါ်ထိုင်နေသော သူသည် ပြုံးရွှင်သော မျက်နှာထားဖြင့် ဖော်ရွေစွာ နှုတ်ဆက်လေသည်။
``ကဲ ဆရာကို ထမင်းကျွေးရအောင် သမီးရေ ဆိုင်ကို သွားယူချည်ကွယ် ´´ `` သြော် နေပါစေဦးခင်ဗျ လောလောဆယ် မဆာသေးပါဘူး ဦးခင်အောင်ကို စစ်ဆေးကြည့်ပါဦးမယ် ရှိရင်တော့ ပွဲတင်ကြရအောင် ´´ `` ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါနဲ့ မသိလို့ မေးပါရစေ တမျိုးမထင်ပါနဲ့ ´´ ``မေးပါ မေးပါ ´´
`` စစ်လို့ ပယောဂရှိရင် ပွဲဝယ်ပါ့မယ် ။
သိချင်တာက ပွဲ မတင်ပဲ ကုလို့ မရဘူးလား ကျွန်တော် နှမျောလို့မဟုတ်ဘူးနော် ´´
`` ပွဲတင်တယ်ဆိုတာက ဒီလိုပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ပယောဂ ကုတယ်ဆိုရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းလို့ တခြားသူတွေက ထင်ချင်ထင်လိမ့်မယ်ဗျ တကယ်က အဘတွေရဲ့ ဖေးမစောင့်ရှောက်မှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေ သတ္တ၀ါ ကယ်မ နိုင်နေကြတာပါ ။ ´´ ``ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ´´
`` စစ်တာက ပွဲမပါပဲ စစ်လို့ သင့်တော်ပါတယ်။ ကုမယ်ဆိုရင် ပွဲဝယ်လို့ ရတဲ့ အခြေအနေ ရှိနေရင် ဝယ်သင့် တင်သင့်တာပေါ့ ဒီလိုပါ ပွဲမပါလို့ ရောဂါမပျောက်တာမရှိပါဘူး ရိုသေလေးစားမှုသဘောလေးပါ ။ ဥပမာဗျာ တောထဲရောက်နေတယ် မြွေကိုက်လူနာတွေ့တယ် ချက်ချင်းကို ကုရမယ်ဆိုရင် ပွဲဝယ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့ လူနာ အသက်ထွက်ရောနေမှာပဲ ဟုတ်လား ´´
``ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ဒါနဲ့ ဆရာရယ် ပယောဂရှိမရှိ မိမိကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆရာ ကျွန်တော်က လက်တွေ့သမားဆရာရဲ့ ဆရာ့အကြောင်းကို မြင့်သိန်းက ပြောတော့ ပြောပြပါတယ် ။ ကျွန်တော်က ကိုယ်တိုင် သိရချင်တာလေ ´´
``မပူပါနဲ့ ဦးခင်အောင် ကျွန်တော်က အထက်လမ်းဆရာဆိုတော့ စိတ်ဓာတ်တွေက တပါးသူအခက်အခဲကို မိမိတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ ကယ်ရမှာမဟုတ်လား ။ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ခံစားသိရတဲ့ ပညာပါဗျ ´´
``ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဝမ်းသာပါတယ် ကျွန်တော့်ဖြစ်စဉ်လေးတွေ ပြောပြမယ် ကျွန်တော်က ထမင်းဆိုင်လည်း ဖွင့်ထားတယ် အခြားကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လည်း လုပ်ပါတယ်၊ အပြိုင်အဆိုင်များတယ်ပေါ့ဗျာ ´´``ဟုတ်ကဲ့ ´´
`` လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်အထိ အတော်တိုးတက်လာခဲ့တာဗျ ဒါပေမယ့် ဒီ၂၀၁၅ ခုရောက်မှ စီးပွားရေးရော ကျန်းမာရေးရော သိသိသာသာကို ထိုးကျလာတာပါပဲ ဟောဒီခြေထောက်ဆိုရင် လေဖြတ်သလိုလို အတွင်းက နာသလိုလို အဲတာဆေးခန်းပြတော့လည်း အပြစ်မတွေ့ဘူး လေဖြတ်ရင်လည်း နာတာကို မသိရဘူးမလား ဆွဲဆိတ်ရင် သိတယ် ဒါပေမယ့် လမ်းကောင်းကောင်း လျှောက်မရလို့ ထိုင်နေတာပဲ ကြည့်တော့ ခဏနေတော့ လျှောက်လို့ရပြန်ရော မနာပြန်ဘူး ´´ `` ဟုတ်ကဲ့ ´´ `` ကဲ စစ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ ဦးခင်အောင်ရဲ့ အသက်ခန္ဓာနဲ့တကွ ပိုင်ဆိုင်သမျှ ပစ္စည်း အိမ်ခြံမြေ စီးပွားရေး စတာတွေနဲ့တကွ ဘဝစွဲ ဘဝဆက်များပါမကျန် မကောင်းတဲ့စက်တွေ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် စစ်ဆေးဖို့ အပ်ပါ ´´ ``အပ်ပါတယ် ´´ ``ကဲလာဗျာ ဘုရားစင်ကို ကျောပေးခြေဆင်းလိုက် ´´
ဆရာမောင်မောင်မှ သစ္စာဆို၍ ဂိုဏ်းတော်မှ ဆရာတော်များကို ပင့်ဖိတ်၍ ရေစင်တော် တောင်းခံသည်။
!!! ဟဲ့ ခု ဝင်ပူးနေတာ ဘယ်သူလဲကွ ဒီဖက်လှည့်စမ်း !!!!
ဦးခင်အောင်မှာ တုန်ရီလာပြီးနောက် ဆရာကို ပမာမခန့် ကြည့်လေသည်။ ဆရာမောင်မောင်မှထိုသို့ ကြည့်လာသူ မိစ္ဆာကို စောစောက တောင်းယူထားသော ရေစင်ဖြင့်တောက်၍ အမိန့်ပေးသည်။
!!! ဟေ့ မေးနေတယ်လကွာ မလှည့်ရင်မေးတာမဖြေရင် စွဲရင်းအတိုင်း မီးလောင်ခံစေကွ ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေ ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးပစေ ချုပ်တုပ်ထားပြီး ဆရာဖက်ကို ဆွဲလှည့်ပေးလိုက်စမ်း စွဲရင်းကိုခေါ်တာ တပည့်မလာခဲ့နဲ့. ခေါင်ချုပ်ကိုယ်တိုင်လာစမ်း !!! ရေစင်တော်ဖြင့် တောက်လိုက်သောအခါ
``ရောက်ပြီ ´´ ပြောပြောဆိုဆို ဦးခင်အောင်သည် ဆရာမောင်မောင်ဖက်သို့ လှည့်၍ ခြေထောက်ကို တင်ကလင်ချိတ်၍ ထိုင်လေသည်။
!!! ဟဲ့ ပမာမခန့်လုပ်နေတာဆိုရင် အဲခြေထောက်ကို ဆိုင်ရာ တုတ်နဲ့ရိုက်စမ်း ကိုယ်တိုင်ခံကွ !!!
`` ဟေ့ရောင် အိမ်မှာလည်း ငါအဲလိုပဲထိုင်တာကွ ´´ ဝင်ပူးသောသူက ထိုသို့ ပြန်ပြောသည်။
!!! မလိုချင်ဘူးကွ ဒါ ဘုရားနဲ့တကွ အဘဆရာတော်တွေရဲ့
ရှေ့မှာ ၊ ငါ့ရှေ့မှာ အဲလိုမထိုင်ရဘူး !!! `` အေးပါကွာ မင်းနိုင်တော့ မင်းပြောသမျှပေါ့ ´´ ဟုဆိုကာ ခြေထောက်ကို ပြင်ထိုင်လေသည်။
!!! မင်း ယောကျာ်းဟုတ်တယ်မလား !!! `` ဟ ယောကျာ်းမို့
ယောကျာ်းလို ထိုင်တာ မင်းမမြင်ဘူးလား ´´ ဝင်ပူးသောသူမှ
!!! ဟကောင် ဟကောင် မင်းငါ့ကို ဒေါသဖြစ်အောင် လာမဆွနဲ့ မေးတာကို အေးအေးဖြေ ခိုင်းတာကို အသာတကြည်လုပ် ငါ စိတ်မတိုခင် အပြောအဆို ဆင်ခြင်စမ်း !!! ဟု ဆိုကာ
ရေစင်တော်နှင့် လှမ်းတောက်လေရာ ဝင်ပူးသူမှာ ထပ်မံ၍ တွန့်သွားပြန်လေသည်။ |
``ပူသလားကွ ´´ ဟုမေးရာ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။
``ဒါဆို မင်းဘာအဆင့်လဲ သူနဲ့တကွ ကျန်သူအားလုံးကို မင်းဘာလုပ်ထားလဲ ဖြေစမ်း´´
`` ငါက အောက်လမ်း သူ့စီးပွားပျက်အောင် မကျန်းမာအောင် လမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ်။
ဒေါသအလိုလိုထွက်အောင်လုပ်ထားတယ် ။ ငါတပည့်သရဲတွေနဲ့ သူ့လည်ပင်းကို ညှစ်ပြီး အသက်ရှူမဝအောင် လုပ်တယ်ကွာ ။ စိတ်တိုလာတော့ မိတ်ပျက်ပြီးတော့ စီးပွားရေးလည်း ပျက်အောင်ပေါ့ကွ ၊ မင်းအဲလောက်တောင် နားမလည်ဘူးလား ´´ ဆရာမောင်မောင် သည်းခံလိုက်သည်။ ဖြေတာတောင် စကားက အဖျားခတ်သွားသေးသည်။
``မင်းအောက်လမ်းရော ဟုတ်ရဲ့လား ဟဲ့ ဆိုင်ရာစစ်စမ်း အောက်လမ်းမှန်ရင် နေမြဲအတိုင်း မဟုတ်ပဲ အောက်လမ်းအဖြစ် ဟန်ဆောင်ရင် မီးကွင်းနဲ့ ပစ်စမ်း´´ အမိန့်ပေးသော်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ဒါဆို အောက်လမ်းအစစ်ဖြစ်မည်။
`` သူ့လုပ်ငန်းတွေရော ခြံမြေ စတာတွေ မင်းဘာလုပ်သေးလဲ ´´ ``အကုန်ပဲကွာ အကုန်ကိုလုပ်ထားတယ် ´´ ``ဘာလို့လုပ်သလဲ ´´
`` ပိုက်ဆံပေးလို့ လုပ်ပေးတာ ´´
``အေး မင်းပိုက်ဆံရတိုင်း သူများမကောင်းတာဖြစ်ရအောင် လုပ်တယ်ဆိုရင် အခု ငါ မင်းကို ကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်မယ် သူလို နေမကောင်းအောင် စီးပွားပျက်အောင် မင်းကြိုက်မလား ´´ `` မင်းလုပ်နိုင်လို့လား ´´
``အေး ငါတို့ ဂိုဏ်းဆရာဆိုတာ စိတ်ထားမြင့်မြတ်ရတယ် သူတပါးကို မကောင်းတာလုပ်ထားသူကို ကြုံရင် ဆုံးမခွင့်ရှိတယ်ကွ အေးအေးဆေးဆေး ပြောလို့မှ မရရင် ငါ့ကို မင်းက စိမ်ခေါ်တာလား အောက်လမ်း
`` မင်းလုပ်နိုင်ရင် အခုလုပ်စမ်း ´´
`` ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့ ဟဲ့ အခုဝင်ပူးနေတဲ့ မိစ္ဆာစွဲရင်းရဲ့ ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းအားလုံး ချုပ်ထား ပညာစက်ပါမချန် အားလုံးချုပ်ထား တပည့်များပါမကျန် အားလုံးချုပ်ခံရစေ။ စွဲရင်းတစ်ဦးတည်းသာ ပူးနိုင်စေ ´´ ဟုဆိုကာ ဆရာမောင်မောင်သည် လေထဲတွင် လှမ်းဖမ်းလိုက်သလို လုပ်ပြီးနောက် အနီးနားရှိ ပလပ်စတစ်အစလေးတစ်စ ကို ယူကာ ဒီမှာ အားလုံးချုပ်ခံရစေ။ အဘတွေ အမိန့်မရပဲ မလွတ်စေရ မသေစေရ ´´ ဟုဆိုကာ ထိုပလပ်စတစ်စကို မီးခြစ်ဖြင့် ရှို့ဟန်ပြုလေသည်။
မီးတောက်သည် ပလပ်စတစ်စကို မစွဲသေး မီးတောက်အရှိန်ကြောင့်သာ ပလပ်စတစ် ဘေးနှုတ်ခမ်းစလေးများသာ လိတ်တက်လာသည်။
ထိုအခါ အောက်လမ်းသည် ငယ်သံပါအောင်ကို အော်လေသည်။ အားးးး ပူတယ် ပူတယ်
!!!ဟေ့ကောင် အောက်လမ်း ဒီပလပ်စတစ်အစ မီးလောင်အရည်ပျော်ရင် မင်းဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲကွ ဟေ့ကောင်ဖြေစမ်း ခုဖြေ !!! မရှို့သေးပဲ မီးဟပ်ရုံအနေအထားဖြင့်သာ မေးနေခြင်းဖြစ်သည်။
``မလုပ်ပါနဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ ငါ့ကို ပြန်လွှတ်ပေးကွ ငါ့ကလေးတွေ ရှိသေးတယ် ´´ ``သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းလုပ်ထားတဲ့ အရာ
အကုန်သိမ်းစမ်း သက်ရှိသက်မဲ့ ပါမကျန် မကောင်းတာမှန်သမျှ သိမ်းစမ်း မင်း သိမ်းလို့ မကုန်မချင်း စောစောက အပူအတိုင်း ဆက်ပြီး အပူခံနေရစေ ´´
``သိမ်းပါ့မယ် သိမ်းပါ့မယ် အပူလေး နည်းနည်းလျှော့ပေးပါ ငါ့ ခြေထောက်ကို မီးလောင်နေတယ်ကွ ၊ ´´ `` ဟေ့ မင်းသူ့ကို လုပ်တာတွေ အကုန်ရှင်းပြီးပြီဆိုရင် မင်းခြေထောက် နဂိုအတိုင်း ပြန်ကောင်းစေ ။ ဟင်းဟင်း ကိုယ့်အသားကျတော့ ပူသတဲ့ သူများကျတော့ ခြေထောက်က လမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်လုပ်ထားတယ် မကျန်းမာအောင်။ အဲတာ မူလပြန်ပညာကွ ။ မင်းက စောစောက ဘုရားရှေ့ ငါ့အဘတွေရှေ့ ပမာမခန့် လာလုပ်တာကိုးကွ မင်းအခု ကုန်အောင်ရှင်းရင်သက်သာမယ် ပူနေသေးတာက မင်းစိတ်က မမှန်သေးလို့ပဲကွ ´´
`` ဒါဖြင့် ငါအပူသက်သာအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ ´´ `` ဒီကာယကံရှင်ကို ကျန်းမာစေဖို့ မေတ္တာပို့ မင်းလုပ်တာရော မင်းလက်ချက်မဟုတ်တာရော အကုန်ရှင်းကွ မင်းစိတ်က သူ့ကို တကယ်ပျောက်စေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပြန်ထုတ်ပေးရင် မင်းမပူတော့ဘူး ဟုတ်လား ဟေ့ကောင် ရွှေရင်ကျော်ကွ ဘာတဲ့လဲ ´´ `` အေးပါကွာ ငါ ထုတ်ပေးပါမယ် အိမ်ခြံအတိုက်ကို လုပ်ထားတာက များတယ် ငါ့ဟာငါ ပြန်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ခြံအတိုက်က ကြာဦးမှာ မင်းကူညီပြီး ရှင်းပေး ´´
`` မင်း ငါ့ကို ဆရာလို့ခေါ် မင်းကိုယ်မင်းလည်း ပြင်ခေါ်စမ်း ဟေ့ကောင် ´´ ``ဟုတ် ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ တောင်းပန်ပါတယ် ´´
ထို့နောက် ဆရာမောင်မောင်သည် ဝင်ပူးသော အောက်လမ်းဆရာအား နောက်ထပ်မလုပ်ရန် သစ္စာရေ တိုက်လေသည်။ ထိုသစ္စာဆိုခိုင်းရာတွင် အောက်လမ်းမှ မမှန်ကန်ပါက အနာဂတ်ဘဝတွင်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ဟု မဆိုခိုင်းပဲ လက်ရှိဘဝမှာကို ချက်ချင်း တန်ပြန်ထိခံရစေ ထိုသစ္စာရေမှ အလိုလို ဆုံးမစေ ဟု ဝန်ခံသစ္စာဆိုခိုင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ပြန်စစ်ရာ လူနှင့် စီးပွားရေးတွင် ဘာပယောဂမှ မရှိတော့ပဲ အိမ်ခြံဝင်းတွင်သာ ကျန်တော့သည်။
ဆရာမောင်မောင်မှ ထိုကိစ္စအတွက် သဲမန်း ဆန်မန်းများ စမဆွဲ၍ စီရင်ကာ နေ့ချင်းပင် အပြတ်ဖြတ်လိုက်လေတော့သည်။
`` အံ့သြလိုက်တာဆရာရယ် ကျွန်တော့်ခြေထောက် လုံးဝကို ပေါ့သွားပြီဆရာ ။ ဒီအတိုင်းဆို ပြေးလို့ကို ရသေးတယ် ´´ ဦးခင်အောင်က သူကိုယ်တိုင်ခံစားရသည့် အရာကို အံ့သြလျက် လက်တွေ့ ပျောက်ကင်းသွားကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလေသည်။
`` လည်ပင်းရော ကြပ်သေးလား အခု အသက်ရှူလို့ဘယ့်နှယ့်နေလဲ ´´ `` ဟား ကောင်းတာပေါ့ဆရာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူပျိုတောင် ပြန်ဖြစ်သွားပြီလားလို့တောင် မှတ်ရတယ် ကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဆရာ ´´ ဟုဆိုကာ ဦးခင်အောင်မှ ထိုင်ကန်တော့လေသည်။
`` ဟာ ကုနေလို့ ဆရာထမင်းစားချိန်တောင် လင့်နေပါပေါ့လား ကဲ သမီးရေ ´´ `` ဟုတ်အဖေ သမီး ထမင်းဟင်းသွားယူလိုက်ပါ့မယ် ´´
`` သြော် နေနေ အဖေပဲ လမ်းလျှောက်ပြီး သွားယူလိုက်တော့မယ်သမီးရေ အဖေ့ခြေထောက် ကောင်းသွားပြီဟ ´´ `` ဟုတ်အဖေ နို့မို့ သမီးသွားယူပေးမလို့ပါ အဖေ့ကို ဆရာကုနေတာက အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေလို့ပါအဖေ ၊ နောက်ပြီး သမီး ဆရာ့ကို ပြောပြအကူညီတောင်းစရာလည်း ရှိနေလို့ သမီးနေခဲ့ပါရစေ ´´
`` အေးအေး သမီး အဖေဆိုင်ကို သွားပြီ ဆရာခဏလေးနော် ခွင့်ပြုပါဦီး ´´ `` ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ ´´
သို့နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူ ထွက်သွားပြီးနောက် ထိုကလေးမလေးသည် ဘုရားဦးတိုက်ပြီးလျှင် ဆရာမောင်မောင်အား ကန်တော့လေသည်။
``ကဲ သမီး ဆရာ့ကို ဘာပြောချင်သလဲ ဆရာကူညီနိုင်တာဆိုရင် ကူညီပါ့မယ်သမီးရယ် ´´
`` ဟိုလေ ဆရာ သမီးနာမည်က ဟေမာပါ ။ အသက်က ၂၄ နှစ်ပါ ´´ `` ဆက်ပြောလေ သမီး ´´
``ဟို ဟို သမီး ပြောရမယ့်ဟာက ပြောလို့မထွက်ဘူးရှင် ဘုရားစင်ရှေ့လည်းဖြစ်နေတယ် သမီး ဟိုလေ ၊ မပြောတော့ပါဘူးရှင် ´´
`` အဲလိုမဟုတ်သေးဘူးလေ သမီးရဲ့ ၊ အချို့ကိစ္စတွေက ရှင်းအောင် ပြောပြမှ ကောင်းမယ်ဆိုရင် ပြောရမှာပေါ့ ။ သမီးပြောရမယ့်ဟာက မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် ဘာမပြောရဲစရာရှိသလဲ ၊ ဘုရားစင်ရှေ့ မပြောချင်ရင်လည်း ဟိုဧည့်ခန်းမှာ ပြောကြပါစို့ ရတယ်နော်သမီး ၊ ပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ တတ်နိုင်တာ အားလုံး ကူညီပါမယ် ။
သမီး ဖြစ်နေတာက ဆရာကူညီနိုင်တာဖြစ်နေပြီးမှ သမီးက ရှက်စရာလို့ ယူဆနေရင် သမီးပဲ နစ်နာသွားမှာပေါ့ ´´
`` ဟုတ်ဆရာ နားနဲ့ မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါဆရာ ဆရာ့ကို လေးစားပြီး အားလည်းကိုးပါတယ် ဆရာ့ပညာကိုလည်း ယုံကြည်ပါတယ် သမီး ပြောပြပါတော့မယ်´´
သို့နှင့် ဆရာမောင်မောင်သည် သမီးလေးဟေမာပြောသော ကိစ္စအား နားထောင်ရန်အလို့ငှါ ဧည့်ခန်းသို့ နှစ်ယောက်သား ထွက်ခဲ့ကြတော့၏ ။
ဆရာမောင်မောင်နှင့် ဟေမာတို့ ဧည့်ခန်းသို့ရောက်ရှိချိန်တွင် ကိုမြင့်သိန်း ၀င်လာသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
“အဲဗျာ ကိုမြင့်သိန်း ခင်ဗျားကိုမေ့နေတာ ဘယ်သွားတာလဲဗျ ” “ သိပါတယ်ဆရာရယ် ဆရာက ပယောဂကုနေရရင် အကုန်ကို မေ့နေတာ ၊ ကျွန်တော် ကွမ်းယာထွက်ဝယ်မယ်ဆိုပြီး အပြင်ခဏထွက်သွားတာ အသိတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီး စကားကောင်းနေလို့ပါ ၊ စောစောက ဦးခင်အောင်ကြီးအပြင် ထွက်သွားတာကိုတော့ မြင်လိုက်တယ် အခြေအနေဘယ်လိုလဲဆရာ ”
“ ကုပြီးသွားပါပြီ အခု ဒီသမီးလေးလည်း သူဖြစ်နေတာကို ပြောပြချင်လို့တဲ့ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ မပြောဝံ့လို့ အခု ဧည့်ခန်းကို လာရတယ် ” “ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ကျွန်တော်ရှိနေရင် သမီးက စကားပြောရတာ ရွံ့နေမယ် အိမ်ရှေ့ကပဲ စောင့်မယ်ဆရာ ”
“ကဲ ပြောသမီး အဖြစ်အပျက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ ပြောသမီး၊ ဆရာတတ်နိုင်တဲ့အရာကို ပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အစွမ်းကုန်ကူညီမယ်နော် ” “ ဟုတ် ဒီလိုပါဆရာ သမီး ပြောတဲ့စကားမှာ …… ” “ ရတယ်သမီး အကုန်သာပြော နားလည်ပေးပါတယ် ဒါမှ ရှင်းမှာ ”
“ သမီး အိပ်တိုင်း အိပ်တိုင်းလိုလို သမီးရဲ့ ဟိုဟာက ဟိုလေ …. ” “ ပြောသမီး ဆက်ပြောပါ ” “ အရည်တွေ အလိုလို ဆင်းလာတယ်ဆရာ ကန်တော့နော် ” “ အဲတာက သမီးစိတ်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါဦးနော် သဘာဝအရလည်း ဖြစ်တတ်တာကိုး ”
“ မဟုတ်ဘူးဆရာ အိပ်ပျော်မလို့ မှေးသွားတိုင်း အလိုလို ဖြစ်တာ၊ မအိပ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ တခါတခါ သမီး အရမ်းအိပ်ချင်နေခိုက်မှာတောင် အဲလို ဖြစ်ဖြစ်လာတာ၊ သမီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် တစ်ယောက်ယောက်က သမီးဆီကို လာနှိုးဆွနေသလိုပဲ၊ ဟိုလေ အဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မခံစားဖူးသေးတဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားရတယ်၊ ဟို ဟို … အောက်တွေ ယားလာတယ်ဆရာ၊ တခါတခါကျတော့ သမီး သမီး သားမြတ်တွေလည်း ယားလာတယ်၊” “ နေ့ခင်းရော ဖြစ်တတ်သလား သမီး ”
သမီးက နေ့ခင်း အလုပ်လုပ်နေချိန်တော့ မဖြစ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် နေ့ခင်း အိပ်ဖြစ်တဲ့အခါဆိုရင် ဖြစ်တယ် ” “ သမီးမှာ ရည်းစားရှိလား ဆရာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါသမီးရယ် ” “ ဟင့်အင်း မရှိသေးပါဘူးဆရာ ”
“ အဲလို ယားနေချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က သမီး ဟိုဟာကို လာပြီး လျက်ပေးနေသလိုဖြစ်ပါတယ် ” “ သမီးက အဲလိုဖြစ်တဲ့အရာရဲ့ ခံစားမှုနောက်ကို လိုက်သွားသေးသလား ”
ဆရာမောင်မောင်မှ ထိုသို့မေးလိုက်သောအခါ နဂိုတည်းကမှ ရှက်နေသော ဟေမာ့မျက်နှာသည် ပန်းနုရောင်ပြောင်းလဲသွားပြီး မျက်နှာလွှဲသွားတော့သည်။ သူမ၏ မျက်ဝန်းအိမ်တွင် ရှက်၍ဖြစ်သော အရည်ကြည်တို့သည် ဝန်းရံလာကြတော့သည်။ သနားစရာကောင်းလှသောအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ဆရာမောင်မောင် အလွန်အားနာသွားမိသည်။
“ ဆောရီး သမီးရယ် ဆရာက တိတိကျကျ သိချင်ဇော အားကြီးသွားလို့ပါ သမီးကိုလည်း စစ်ကြည့်ပေးမှာပေါ့ အဓိကက သမီးရယ်…. ပယောဂတကယ်ဖြစ်ကြည့် ရှက်နေလို့ ပယောဂ မပျောက်ဘူး၊ မရှက်သင့်ချိန်မှာ မရှက်ပဲ အားလုံး ပြောပြမှ သမီးကိစ္စ ပြေလည်မှာနော် သမီး ”
ထိုသို့ သူမဆိုပြီးနောက် အတန်ငယ်တိတ်ဆိတ်သွားရာ ဆရာမောင်မောင်မှ အိမ်ရှေ့သို့ ထွက်ဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်စဉ် …
“ သမီးလည်း သာမာန်ပုထုစဉ်ပဲလေ၊ အဲလိုဖြစ်လာတော့ နည်းနည်းတော့ သာယာမိတာပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှ မမြင်ရပဲ အဲလိုဖြစ်ဖြစ်နေတာ လူလည်း မဟုတ် ”
“ အင်း ” “ အဲလို ဖြစ်ချိန်မှာဆိုရင် သမီး အသက်ရှူကြပ်လာတယ်။ လှုပ်လို့လည်း မရတော့ဘူး၊ အသံလည်း မထွက်တော့ဘူးဆရာ၊ အဲလိုဖြစ်ရတာကို သာယာစိတ်ဖြစ်လာတော့မှ အသက်ရှူချောင်လာတယ် အဲလိုကြောင့်လည်း သမီး မြန်မြန်ပြီးသွားအေးရောဆိုပြီး ငြိမ်နေလိုက်ရတယ် ရုန်းလေ မွန်းကြပ်လေပဲဆရာ ” “ အင်း ပြီးတောရော ” “ အဲလို ဖြစ်ပြီ ယားလာပြီဆိုရင် သမီး ဟိုဟာထဲကို တစ်ခုခုက ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ဆရာ ” “ သြော် “ တခါတခါများဆို သမီးအဲဟာကို အရမ်းတောင့်တစိတ်တွေ ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်တယ်နေ့ခင်းမှာ၊ အဲလိုဖြစ်ဖြစ်လာပြီးရင် ညကျရင် သေချာပေါက်ဖြစ်တာပဲ ”
“ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတတ်သလဲသမီး” “ ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ပေါ့ တခါတခါတော့ နာရီဝက်လောက်ကြာတတ်တယ် ” “ နေ့စဉ်ဖြစ်တာလား ” “ ၂ ရက်ခြား ၃ ရက်ခြားလောက်ပါဆရာ ” “ အင်း ပယောဂ ရှိလောက်တယ်သမီး ”
“ ဆရာ သမီးနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိနေသလို အခု ခံစားရတယ်၊ ဆရာ့ကို ဒီစကားတွေ ပြောပြနေရင်းနဲ့ ဒေါသထွက်သလို ဖြစ်မိသလားပဲ ” “ အခု ဒေါသထွက်နေသလို ဖြစ်သလား ” “ ဖြစ်တယ် ဆရာမေးတာကို ဖြေချင်သလို မဖြေချင်သလို တစ်ယောက်ယောက်က တားနေသလိုလားမသိဘူး ”
ထိုစဉ် ဦးခင်အောင် ပြန်ရောက်လာလေသည်။ နောက်မှ ခြင်းတောင်းတစ်လုံးထမ်းလျက် လူငယ်လေးတစ်ယောက်လည်း ပါလာသည်။ “ ဆောရီးဆရာရေ ကျွန်တော် ထမင်းဟင်းသွားယူနေရင်းက ကုသာကုပြီးသွားတယ် ပွဲတင်ဖို့ မေ့နေတာ ”
“ ဟာ ဟုတ်တာပေါ့ ဦးခင်အောင်ရေ၊ ကျွန်တော်လည်း ဟိုအောက်လမ်းက ဝင်ပူးတော့ စိတ်က ကုချင်ဇောအားကြီးပြီး ပွဲတင်ဖို့ မေ့သွားတယ်၊ အဘတွေ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ ” ဟုဆိုကာ လက်အုပ်ချီလေသည်။ “ ကဲ ဦးခင်အောင်ရေ ပွဲမပါလည်း ကုလို့ရတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့သိရပြီနော် ”
“ ဟုတ်ပါပေ့ စွမ်းပါပေ့ဆရာ ၊မိန်းမက ထမင်းဆိုင်စောင့်နေတယ်၊ သူက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လုပ်တတ်တော့ ဘယ်လိုပွဲဝယ်ရမယ်ဆိုတာ ရေးချပေးလိုက်လေရဲ့၊ လိုရင်လည်း ထပ်ပြောပါဆရာ ထပ်ဝယ်ပေးပါမယ်” “ ပြည့်စုံပါတယ်ဦးခင်အောင် ” “ ကဲ သမီး ဆရာ့ကို ထမင်းပွဲပြင်ကွယ် မြင့်သိန်းရော တခါတည်းဝင်စား အားမနာနဲ့ ” ကိုမြင့်သိန်းမှ “ စားဖို့စောင့်နေတာလေဗျာ ” ဟား ဟား ဟား ပြိုင်တူ ရယ်သံများ ဆူညံသွားတော့သည်။
လေးယောက်စား စားသောက်နေခိုက် ဟင်းထည့်ပေးနေရင်းမှ ဦးခင်အောင်က “ သမီးက ဘာတွေ ပြောဖြစ်လဲ ဆရာ ” “ အယ် အဲတာ ” “ ဟုတ်ဆရာ ပြောလိုက်ပါ မဟုတ်လည်း ကုတဲ့အခါ သိရမှာပဲ ” ဟေမာက ထိုသို့ ၀င်ပြောသဖြင့် ဆရာမောင်မောင်ကလည်း ထမင်းစားနေရင်းက ပြန်ပြောပြရလေသည်။ စားသောက်နေရင်း ထိုဖြစ်စဉ်ကို ပြန်ပြောပြရသော အနေအထားကို မြင်ကြည့်ကြပါကုန် …
“ ဒါဆို သမီးဟေမာမှာလည်း အတိုက်အခိုက် ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာ ” “ အဲတာ အတိုက်အခိုက်မဟုတ်ဘူး ချစ်လို့ဗျ ” “ သြော် ”
ထမင်းစားသောက်ပြီးနောက် ဆရာမောင်မောင်သည် ပွဲကို ကျကျနနပြင်သည်။ ပွဲမပြင်ခင် ပထမဦးစွာ ဦးခင်အောင် ဝယ်လာသော အုန်း ငှက်ပျော စသည်တို့တွင် မကောင်းမိစ္ဆာစက်များပါရှိနေလျှင် ပျက်ပြယ်သွားရအောင် ရေစင်တော်တောင်းခံ၍ ဖြတ်တောက်လေသည်။
!!! ဟဲ့ ဒီသောကြာသမီးရဲ့ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ ၃၂ ကောဌာသမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ မကောင်းတဲ့စက်ထည့်ထားရင်လည်းကောင်း သူမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြားနေရာမှာ မိစ္ဆာစက်ဝှက်ထားလျှင်သော်လည်းကောင်း စင်္ကြ၀ဠာပြင်ပမှရောက်နေလျှင်သော်မှ ဘယ်နေရာမှ မရှောင်နိုင်စေရ ခုရောက်စမ်း၊ ရှိနေပါလျက် ပုန်းနေရှောင်နေလျှင် ဆိုင်ရာပိုင်ရာ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးစေ အကြီးဆုံးကို ဂုတ်ကနေဆွဲခေါ်ခဲ့ ” ပထမ ခြေဆင်းစစ်ဆေးရာ ခြေထောက်တွင် ကပ်နေလေပြီ။ သူမ၏ ယာဖက်ခြေထောက်သည် ကြမ်းနှင့် ကပ်နေသည်။ သို့သော်ငြား မ ၍ ရနေသေးသည်။ ရှိကြောင်းကိုတော့ ပြနိုင်ပြီ။ သို့သော်ငြား ခြေထောက် မ၍ ရနေသေး၍ မိစ္ဆာ စက်အားမပြည့်သေးဟု မှတ်ရသည်။
“ ဟဲ့ မိစ္ဆာမှန်ရင် မရောက်မရှိရ၊ မီးလိုပူစမ်းကွ ” “ ဆရာ ဆရာ သမီးဆီးစပ်က ပူတယ်ဆရာ ”
ခက်ချေပြီ။ ပေကပ်ခံနေသော မိစ္ဆာစက်မှန်လျှင် လက်နဲ့ သပ်ချလျှင် လိုက်လာရသည်ချည်းသာဖြစ်သည်။ယခုမူကား လက်နဲ့ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်အပ်သည့်အရာ မဟုတ်ချေ။
“ ဟဲ့ အဲဒီ ပူတဲ့နေရာမှာ ခိုပုန်းနေတာပါဆိုရင် ခြေဖဝါးမှာကပ်နေစမ်း ဆိုင်ရာက မိမိရရ ချုပ် တုပ်စေ ” ဟုဆိုကာ သူမ၏ ဆီးစပ်နေရာသို့ စိတ်ညွှတ်လျက် လက်ဖြင့် အပေါ်မှ မထိပဲအုပ်မိုးပြီး ယာခြေသို့ ပို့လေ၏။ ထိုအခါမှ သူမ၏ ယာခြေသည် သူမအားနှင့် မ၍ လုံးဝ မရတော့ပဲ ကြမ်းပြင်နှင့် ဆံချည်မျှင်မျှပင်မကွာအောင် ကပ်လေ၏။
အမှန်မှာ မိစ္ဆာစက်မှာ သူမခန္ဓာတွင် အမြဲလိုမျိုးရှိနေပြီး ဆရာမှ သတိမမူနိုင်သည့်နေရာ သတိမူမိသော်လည်း မိန်းကလေးဖြစ်၍ ဆရာမှ မထိတွေ့နိုင်သော နေရာတွင် ခိုနေ ပုန်းနေခြင်းသာဖြစ်သည်။
!!! ဆိုင်ရာပိုင်ရာ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးစေ ချုပ်ထား တုပ်ထား၊ သံမဏိကြိုး ဆူးကြိုးအထပ်ထပ်နဲ့ တုပ်ထားစမ်း၊ အတိုက်မှန်သမျှ အားလုံးရှင်း အကူအညီစက်မှန်သမျှ ဖြတ်တောက်ထား !!!
ခြေမှာ ကပ်နေ၍ ဆရာမောင်မောင်မှ တစ်ခုချင်းမေးမြန်းရာ မေးခွန်းကိုဖြေသော ပထမအဖြေနှင့် ထပ်မေး၍ ဖြေသော နောက်အဖြေသည် တစ်ထပ်တည်းမကျချေ။ သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပူးနိုင်သလားဟု မေးရာ ပူးနိုင်သည်ဟုလည်း ဖြေသည်။ မပူးနိုင်ဟုလည်း ဖြေပြန်သည်။ ထိုသို့ ပေကပ်ခံနေသော မိစ္ဆာများကို ဆရာမောင်မောင်မှ နှိမ်ချိုးခဲ့သည်မှာ အံတိုနေပြီ။
!!! သြော် မင်းက ငါ့ကို ပညာစမ်းတာပေါ့ ဟုတ်လား ငါက ပယောဂကုနေတာ ကြာလှပေါ့ ။ အေးအေးဆေးဆေးပြောလို့မရတဲ့ မင်းလိုကောင်မျိုး ငါဆုံးမလာတာ များပြီကွ တစ်ကိုယ်လုံး ပူးမလား မပူးဘူးလား? ပူးမယ် ပူးချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် ယာခြေကပ်ထားစမ်း ဆိုင်ရာပိုင်ရာက စိစစ်ထားစေ !!!
မ ခိုင်းရာ သူမ၏ ယာခြေသည် ပေါ့ပါးစွာ မြောက်တက်လာသည်။
!!! ဟေ့ တစ်ကိုယ်လုံး ပူးနိုင်လျက်နဲ့ မပူးချင်တာဆိုရင် ယာခြေ ကပ်စမ်း !!! ကပ်၍နေသည်။ ဒါဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်မိစ္ဆာမှ စိန်ခေါ်သလို လုပ်နေချေပြီ။ “ ကဲ သမီး ဆရာ့ဖက်လှည့် လက်အုပ်ချီထား ” “ သမီးကြောက်တယ်ဆရာ ဟို နောက်ပြီးတော့ အခု ယားနေတယ် ” “ မကြောက်နဲ့ သမီး အေးဆေးပါ ”
!!! ဟဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးပူးနိုင်လျက် စက်အားကောင်းပါလျက် ပေကပ်ခံနေတဲ့ မိစ္ဆာကို မောင်းသွင်းလိုက်စမ်း၊ အိမ်တွင်း ဦးတင့်တယ်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးက ဒီမိစ္ဆာထက် အခုကုနေစဉ် အဆမတန်ကွာပြီး သာလွန်စေ၊ ကုပြီးနောက်လည်း ဒီမိစ္ဆာက ဦးတင့်တယ်ကို မလွန်နိုင်စေရ၊ ဟဲ့ ကျောကနေ ဆောင့်ကန်သွင်းလိုက်စမ်း ၊ အရေ အရေချင်းထပ် အသားအသားချင်းထပ် အရိုးအရိုးချင်းထပ် ၃၂ ကောဌာသမှာ ကာယကံရှင်ရဲ့ အသက်နဲ့ခန္ဓာကို တစ်စက်ကလေးမှ ဆက်လက်ထိပါးစေနိုင်ခြင်း မရှိစေရပဲ ဝင်ပူးနိုင်စေ။ ဆောင့်ကန်သွင်းချလိုက် !!!
ထိုအခါတွင် ခပ်ငိုက်ငိုက်အနေအထားဖြင့် လက်အုပ်ချီနေသော ပုဆစ်တုပ်ထိုင်နေသော ဟေမာသည် ကျောကော့၍သွားပြီး မျက်လုံးကြီး ပြူးထွက်လာလေသည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် ဆရာမောင်မောင် ပစ်တောက်လိုက်သော ရေစင်တော်သည် ဟေမာ့မျက်နှာအား ထိမှန်၍ နောက်ကို ပက်လက်လန်လဲကျသွားတော့၏။ ပုဆစ်ကား တုပ်လျက်ပင်ဖြစ်သည်။
“ ဟဲ့ ကြိုးပိုင် ကြိုးနဲ့ လည်ပင်းကို ချည် အပေါ်မ တင်ပေးလိုက် ခါးမတ်သွားအောင်လို့ ” ဟုဆိုလိုက်ရာ ဟေမာခန္ဓာကိုယ်သည် ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆိုသလို မည်သူက ပင့်တင်ပေးလိုက်သည်ကို မမြင်ရပါပဲ ပြန်မတ်လာလေသည်။
!!! ကဲ ငါ စကားအေးအေးဆေးဆေး ပြောမယ်ကွ ၊ မင်းကို ငါ မနှိပ်စက်ချင်ဘူး၊ မင်း ဘာလဲ၊ ဘာလို့ လုပ်တာလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ လုပ်ထားလဲ ဟဲ့ ကြိုးပိုင် လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထား သေချာချည် !!!
ဟေမာသည် ပုဆစ်တုပ် မိန်းမတွေထိုင်နေလျက် လက်များ နောက်ပစ်အနေအထား ဖြစ်သွားတော့၏။
“ငါ လုပ်ထားတဲ့နေရာ မင်းသိသလိုပဲ၊ ငါဘာလို့လုပ်တာလဲ ဆိုတာလည်း မင်းသိပြီးသားပဲ မင်းလုပ်စရာရှိတာသာလုပ် ငါကတော့ ထပ်ပြီးလုပ်မှာ ” “ အေး ငါ စောစောက တစ်ယောက်ကို ကုထားတာ သွေးပူနေတုန်းပဲ ၊ မင်း ကောင်းကောင်းဖြေ နားလည်တတ်ရင် အနာသက်သာမယ် ငါ့ကို အပ်ပြီးသား ”
“ ချစ်လို့လုပ်တာကွ၊ ငါသူ့ကို ချစ်လို့ ” “ မင်းက ကိုယ်တိုင် ပညာသည်လား ” “ အေး”
“အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ” “ ၄၀ ကျော် ” “ ဘာပညာနဲ့ လုပ်တာလဲ ”
“ မင်းက ဆရာလုပ်နေပြီး ဒါတွေ မသိဘူးလား ငါတောင် မင်းရောက်နေကတည်းက သိတယ် မင်းဘာကောင်လဲဆိုတာကို ” “ ငါသိပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေ သိဖို့လိုသေးတယ်ကွ မင်းဆက်မဖြေဘူးလား ”
“ မဖြေဘူးကွာ ”
!!! ဟဲ့ ဆင်ပိုင် အားအပြည့်နဲ့ ဟောဒီမိစ္ဆာကို နောက်ကနေ လည်ပင်းကို နင်းထား မသေစေနဲ့ ၊ သောကြာသမီးကို မထိစေရ၊ ”
“ ဒုန်း” ဟေမာမှာ ရှေ့ကို ငိုက်ကျသွားပြီး ကြမ်းနဲ့ နဖူး တိုက်မိလေသည်။
“ ဟဲ့ ကြိုးပိုင် နောက်ကနေ ကြိုးချည်ပြီး ခန္ဓာကို ပြန်မတ်၊ ခေါင်းမတ်သွားတာနဲ့ ဆင်ပိုင်ပြန်နင်း ၁၀ ကြိမ်လုပ် မသေစေနဲ့ ” သို့နှင့် ဟေမာသည် လက်ပြန်ကြိုးတုပ်လျက် ပုဆစ်တုပ်အနေအထား ကြမ်းပြင်ကို နဖူးဖြင့် ဆောင့်နေလေရာ သုံးကြိမ်မြောက်ခန့်တွင် ဦးခင်အောင်မှ ဝင်၍ “ဆရာရယ် ကျွန်တော့်သမီးလေး နာနေပါဦးမယ်၊ အဲဒီလို ကုနည်းနဲ့တော့ မကုပါနဲ့လား ”
“ သမီး ဟေမာကို မထိပါဘူး ဦးခင်အောင်။ မပူပါနဲ့ ၊ အချို့မိစ္ဆာများ တယ်လက်ပေါက်ကပ်တယ်ဗျ။ မေတ္တာပေးပြီး ကုလို့မရဘူး။ မေတ္တာပေးရင် မလိုချင်သူမရှိပါဘူးလို့တော့ ပြောကြတာပဲ။ တကယ်လည်း မေတ္တာပို့တာကို မလိုချင်သူ မရှိပါဘူး။ ဒါပေသိ ကိုယ်ပေးတဲ့ မေတ္တာကိုသာ ဝမ်းပန်းတသာ ယူပြီး ပြန်ကြပေမယ့် ဆက်ပြီး ဒုက္ခပေးတဲ့ မိစ္ဆာက များတယ်။ မယုံရဘူးဗျ ” “ သမီး နဖူးမှာ ရဲပြီး သွေးစို့နေသလားလို့ဆရာရယ် စိတ်ပူလို့ပါ ”
ထိုအခိုက် ကြမ်းနှင့် နဖူးတိုက်တာ ၁၀ ချက်ပြည့်သွား၍ ဆက်မတိုက်ပဲရပ်နေလေသည်။ ဟေမာ့နဖူးကား သွေးစများပင် ထွက်လာသည်။
!!! ဟဲ့ မိစ္ဆာ နင့်အတွက်ပေးတဲ့ ဒဏ် နင်ပဲ ကိုယ်တိုင် အပြည့်ခံဟ ၊ ဝေဒနာပါသိမ်း !!! ဟု ဆရာမောင်မောင်မှ ဆိုလိုက်ရာ မိစ္ဆာမှ လက်ဖြင့် နဖူးကို သပ်ချလိုက်သောအခါ ဟေမာ့ နဖူးပြင်တွင် ပကတိအကောင်းအတိုင်း သွေးမထွက်တော့ပေ။ ဦးခင်အောင်မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် ထိုင်ကြည့်နေလေတော့သည်။
!!! နောက်ထပ် ငါ ဆုံးမရဦးမှာလား ဟေ့ ဝင်ပူးနေတဲ့ကောင် !!!
“ မင်း ဘာသိချင်တာတုန်း ” “ မင်း ဘာပညာနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ထားလဲ တိတိကျကျ မချွင်းမချန်ဖြေစမ်း ၊ သူ့အဖေကို လုပ်ထားတဲ့ အောက်လမ်းနဲ့ အတူတူပဲလား မင်းပဲလား” “ မြန်မာပြည်မှာ အောက်လမ်းဆရာ အဲသလောက်မရှားပါဘူး၊ မင်းပြောတဲ့ကောင်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကတော့ ငါပျင်းသေးတယ် ” “ ထားတော့ကွာ မင်း ကလေးမကို ဘယ်လိုလုပ်သလဲ ပြော ”
“ ငါ သူနဲ့ ပုံစံတူအရုပ်တစ်ခု ဖန်တီးတယ်။ သူဆံပင်ညှပ်တဲ့ဆိုင်ကို လိုက်သွားပြီး ဆံပင်ကို ယူတယ်၊ သူ့အဝတ်အဟောင်းတစ်စုံကိုလည်း ရအောင်ယူတယ်။ အရုပ်မှာ ပတ်တယ်။ ငါ ဆန္ဒရှိချိန်မှာ အရုပ်ကို ကလိတယ်၊ အဲဒီနောက် ငါ့ စိတ်က ကလေးမဆီကို သွားတယ်ကွာ အဲမှာ ငါ့စိတ်ကြိုက်လုပ်ဖို့ ငါ့တပည့် သရဲတွေက ကလေးမကို ချုပ်ပေးကြတယ် ဒါပဲ ”
“ မင်းက အောက်လမ်းပဲမလား ” “ အေး ” “ ဒါနဲ့ မင်း ဒီကလေးမရဲ့ (…..) ကို လျာနဲ့လျက်သေးသလား ”
“ အာ … ဟုတ်တယ်ကွာ ဟုတ်တယ် လျက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လဲ၊ အဲလိုဟာက ငါ့အတွက် မဟာအစွမ်းကိုရတယ် ဒါပဲကွာ ” “ မင်း ဒီသောကြာသမီးကို စွန့်လွှတ်လိုက်တော့ မင်းအသက်က ၄၀ ကျော်ဆိုတော့ အသက်ကလည်း ကွာပါတယ်ကွာ ” “ ………………” “ အိမ်ထောင်နဲ့လား ” “ လူပျိုကွ ” “ မင်းလား လူပျိုဆိုတာ ဟဟ ” “ အိမ်ထောင်မရှိဘူး ”
“ မင်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် အပြင်မှာ လိုက်ပြော ဒါက သဘာဝကျသလို အဲဒီအခွင့်အရေးလည်း မင်းမှာ ရှိတယ် ” “ အခုဒီလိုလုပ်တာကလည်း ငါ့အခွင့်အရေးပဲလေကွာ အပြင်မှာ လိုက်ပြောရအောင်ကလည်း အသက်က ကွာနေတော့ ငါ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြန်ကြိုက်မလဲ ” “ မင်းဟာက သဘာဝအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးကွ၊ မင်းပညာတတ်တယ် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး လုပ်နေတာ။ ငါ သတိပေးတယ်၊ နောက်မှ ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့ မင်းလုပ်ထားတာ အကုန်ရှင်း၊ မင်းလုပ်ထားတာ မကုန်သ၍ မင်းရဲ့ ငယ်ပါကို ငါ သားရေပင်နဲ့ ချည်ထားသလို ဖြစ်စေ။ မသေစေရ ”
ထိုအခါ လူတစ်ယောက်မှ စူးရှစွာ အော်သောအသံကို အပြင်မှာပင် အားလုံး ကြားရလေသည်။ ထိုအချင်းအရာကို ထောက်၍ အောက်လမ်းဆရာသည် ထိုပတ်ဝန်းကျင်ကပဲ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု တွက်ဆသည်။ ခုနှစ်အိမ်ကြား ရှစ်အိမ်ကြားအောင် အော်နေသောကြောင့် ဆရာမောင်မောင်မှ “ နည်းနည်းလျှော့ပေးလိုက် ဒါပေမယ့် သားရေပင်နဲ့ ချည်သလို ဝေဒနာက ဆစ်ဆစ် ဆစ်ဆစ်နဲ့ ရှိနေပစေ၊ ကလေးမပယောဂ အားလုံးစင်ရင် မင်းဝေဒနာ ပျောက်စေ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးတာနဲ့ သားရေပင် အလိုလိုရောက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်စေ မဖြုတ်နိုင်စေရ ကဲ သစ္စာရေသောက်စမ်း၊ ဘုရား ဦးတိုက် အဘတွေဦးတိုက် ငါ့ကိုဦးတိုက် ၊ နောက်တစ်ခါဆိုရင် ငါ တခါတည်း သင်းကွပ်ပစ်မယ် ” သို့နှင့်ဆရာမောင်မောင်သည် ထိုအောက်လမ်းအား သစ္စာရေတိုက်၍ ကုန်စင်ပြီဆိုတာသေချာမှ ပြန်လွှတ်လိုက်လေတော့သည်။
ဦးခင်အောင်တို့ မိသားစုသည်လည်း ဆရာမောင်မောင်အား ကျေးဇူးတင်မဆုံး ရှိကြလေသည်။
“ ကဲ ကိုမြင့်သိန်းရေ ခင်ဗျားကောင်းမှုကြောင့် သတ္တဝါကယ်ခွင့်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ”
အားလုံးရဲ့ မျက်နှာမှာ အပြုံးကိုယ်စီဖြင့် ရှိနေလေတော့သတည်း ……
Credit: Ko Ko Hnin Maung
Author Maungssk at 4:03:00 PM